Finfinnee fi Beeksisa Qacarrii! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFinfinnee fi Beeksisa Qacarrii!
“Dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadu waan ta’eef, Oromoon hundi itti haa hirmaatu!
#Biiroon_Paabiliik_Sarvisii_fi_Qabeenya_Humna_Namaa_Bulchiinsa_Magaalaa_Finfinnee qacarrii hojii namoota #5095’f ta’u muuxannoo hojii waggaa 0’n baasee jira. Akka gaazexaa Addis Zaman, gaafa guyyaa 29/02/2012 ba’eetti, guyyaan galmee Sad. 2/2012 irraa eegalee guyyaa 10’f tura.
#Haatau_malee, akka ulaagaa jalqabaatti kan kaa’amee jiru tokko #Waraqaa_Eenyummaa_Finfinnee qabaachuudha. Kun maaliif ta’e? Eenyuun qacaruuf akkas godhame?
👉Gaaffilee qabsaa’onni Oromoo itti kufaa turanii fi jiran keessaa inni guddaan dhimma #Finfinnee akka ta’e namuu beeka. Kanaaf immoo, yeroo kamuu caalaa yeroon kun murteessadha.
👉Qabxiilee armaan gadiirratti haa xiyyeeffannu!
👉1ffaa, yeroo ammaa kana ijoollonni Oromoo baayyinaan naannoo 6000 (kuma ja’a) ta’an hojii galmeessa filannootiif naannoo Uummattoota Kibbaa keessa jiru. Dorgommiin kun isaan jala darba jechuudha.
👉2ffaa, utuu Finfinneen kan Oromiyaati jennee falminuu beeksisni kun kan maxxanfame afaan amaaraatiin ture; qormaatni isaas afaanuma kanaan kennama jechuudha. Kun kanaan utuu jiruu, beeksisicha afaan oromootti hiikuun namoota maxxansan irratti warri sirna nafxanyaa leellisan maqaa balleessaa fi doorsisaa akka jiran maxxansa isaan miidiyaa hawaasaarratti godhan irraa hubachuun ni danda’ama. Kun maaliif ta’a?!
👉3ffaa, Ulaagaalee galmee keessaa inni guddaan WARAQAA EENYUMMAA (ID) FINFINNEE qabaachuudha. Asirratti namoonni dorgomuu danda’an kanneen bara 2010 fi 2011 keessa barnootasaanii xumuran qofaadha. Isaanuummoo hojii barbaachaaf gara kibbaa jiru. Akkas jechuun warra kana keessaa namni ‘ID’ Finfinnee qabaatu hin jiru; yoo jiraates baayyee xiqqoo ta’a jechuudha.
4ffaa, waan nama gaddisiisu tokkommoo ijoolleen Oromoo warrumti ulaagaalee guutanii galmaa’uuf carraa argatanuu maqaan fo’amanii ‘isin warra Finfinnee miti’ jedhamanii akka galmeerraa dhorkamaa jiran dhaga’aa jirra. Kun immoo Oromoof tuffatamuu fi cabuu guddaadha.
Walumaa galatti beeksisni qacarrii kun ta’e jedhamee ijoollee Oromoo dorgommichaa ala gochuuf kan itti yaadamee ba’eedha. Kunimmoo gama siyaasaanis ta’e gama diinagdeetiin Oromoof hiikkaa guddaa qaba.
1ffaa, beeksisni kun guutummaatti haqamee akka hunda hirmaachisuu danda’utti irra deebiin sororeeffamee ba’uu qaba.
2ffaa, beeksisni kunis ta’ee qormaannisaa afaan ijoolleen Oromoo beekan (afaan Oromoo)tiinis ta’uu qaba.
3ffaa, Utuu nuti waa’ee Finfinneef qabsoo hadhooftuurra jirruu kun ta’uun ittuu humna jabeeffatanii nu cabsuuf waan ta’eef dhimma akka salphaatti ilaalamu miti.
#Kanaafuu, dhimma kanarratti ilmaan Oromoo hundi tokkummaan qabsoofnee sirreessuu danda’uu qabna. Egaa, sagalee tokkoon ergaa kana waliif qoodnee injifachuu qabna.
Dhugaa qabna; tarsiimoon qabsoofna; ni injifanna!